ရွှေမြန်မာများအတွက် အွန်လိုင်းချန်ပီယံ ဆင်းမ်
အထူးနှုန်းဖြင့် ခေါ်ရန် MPT 1.5ဘတ်/မိနစ်
(ကျသင့်ငွေ ရက်30အတွက် 29ဘတ်)
ဘောနပ်စ် 50MB ရက် 30 အတွက်
အခမဲ့ ဆိုရှယ် အပလီကေးရှင်း
ငွေဖြည့် ဘောနပ်စ် ငွေ50ဘတ်ဖြည့်
300MB အင်တာနက် ရက်30
အွန်လိုင်းချန်ပီယံ ဆင်းမ်အတွက် ပက်ကေ့ခ်ျများ
အသုံးပြုနည်း အညွှန်းကို ဒေါင်းလုပ်ရန်
iService မှတစ်ဆင့် အွန်လိုင်းကနေ ကြွေးဝယ်ကဒ် (Credit Card) နဲ့ငွေဖြည့်နိုင်ပါတယ်
iService အပလီကေးရှင်းမှတစ်ဆင့် ငွေဖြည့်နိုင်ပါတယ်။
ထရူးဆိုင်များနဲ့ BTS/MRT ဘူတာရုံတွေမှ TrueMoney စက်တွေ သို့မဟုတ် ATM တွေကနေ ငွေဖြည့်နိုင်ပါတယ်။
ထရူးဆိုင်များ၊ 7-Eleven ဆိုင်များနဲ့အခြား ကိုယ်စားလှယ်ဆိုင်များတွင် ငွေဖြည့်ကဒ် ဝယ်ပြီး ဖြည့်နိုင်ပါတယ်။
5. ထရူးဆိုင်နှင့် စတိုးဆိုင်များ
ထရူးဆိုင်တွေနဲ့ အခြားကုန်စုံဆိုင်တွေမှ ငွေဖြည့်နိုင်ပါတယ်
မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းတွင် အင်တာနက်အသုံးပြုနိုင်ရန် ပြုလုပ်ရန်
1. "Settings" သို့သွားပါ။ "More Network" ကိုရွေးပါ၊ ပြီးလျှင် "Access Point Names" ကိုရွေးပါ။
2. လက်ကိုင်ဖုန်းမှ Menu ကိုနှိပ်ပါ၊ ထို့နောက် "New APN" ကိုရွေးပါ ပြီးလျှင် ပုံတွင်ပြထားသည့်အတိုင်း အချက်အလက်များကို ဖြည့်ပါ [APN Setting for Internet]
3. Menu ကိုထပ်နှိပ်ပြီးတော့ "Save" လုပ်ပါ။
လက်ကျန်ငွေ စစ်ရန် #123#
အင်တာနက် လက်ကျန် စစ်ရန် *900#
မြန်မာဘာသာ ပြောင်းရန် 9304 ကိုခေါ်ပြီး4ကိုနှိပ်ပါ။
အင်တာနက်ဖြင့် ဖုန်းအခမဲ့ခေါ်ဆိုရန် (Viber)
1. ဒေါင်းလုတ်လုပ်ရန် ဤနေရာများမှတဆင့် Android သို့မဟုတ် iPhone
2. သင့်ဖုန်းနံပါတ်ကို သင့်ID အဖြစ်မှတ်ပုံတင်ပါ။ အပလီကေးရှင်းသည် သင့်ဖုန်းထဲတွင် မှတ်ထားသည့်ဖုန်းနံပါတ်များကို Viber အတွက်ဖုန်းနံပါတ် အဖြစ်မှတ်ပေးမည်။
သင့်ဖုန်းနံပါတ်ကို ထည့်ပါ ပြီးလျှင် "OK" ကိုနှိပ်ပါ။ သင့်ဖုန်းတွင် Viber ကုဒ်နံပါတ်ကို SMS မှလက်ခံရရှိလိမ့်မည်။
ထိုလက်ခံရရှိသော ကုဒ်နံပါတ်ကို "Enter Viber Code" တွင်ရိုက်ထည့်ပြီးလျှင် မှတ်ပုံတင်ခြင်း ပြီးဆုံးပါပြီ။
3. သင့်နံမည်ကို ရေးပါ၊ ပြီးလျှင် "continue" ကိုနှိပ်ပြီး မူလ home screen ကိုပြန်သွားပါ
4. အခမဲ့ စာပို့နိုင်သည်
လုပ်ရမှာက သင့်သူငယ်ချင်းရဲ့နာမည်ကို ရွေးပါ ပြီးရင် စကားစပြောနိုင်ပါပြီ။ သင့်သူငယ်ချင်းကို Viber Friends မှာရှာနိုင်ပါတယ်။
အုပ်စု (Group) ဖွဲ့ပြီးတော့ မက်ဆေ့ခ်ျပို့မယ်၊ အုပ်စုတစ်စုထဲမှာ အယောက် 100 အထိပါဝင်နိုင်ပါတယ်။
5. အခမဲ့ ဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်းနဲ့ ဗွီဒီယိုနဲ့ဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်း။ အခမဲ့ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုလုပ်ဆောင်နိုင်ပြီး ဗွီဒီယိုနဲ့ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုကိုလည်း HD အသံအရည်အသွးနဲ့ရပါပြီ။
Viber မဟုတ်တဲ့ မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းနံပါတ်ကို သို့မဟုတ် လိုင်းဖုန်းနံပါတ်ကို အသက်သာဆုံးနှုန်းထားဖြင့်ခေါ်ဆိုနိုင်တဲ့ Viber ရဲ့ဝန်ဆောင်မှုကို "Viber Out Call" လို့ခေါ်ပါတယ်။
နိုင်ငံခြားဖုန်းခေါ်ဆိုမှုနဲ့ ပြည်တွင်းဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများကို အသက်သာဆုံးနှုန်းထားနဲ့ ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
7. Public Chat ဟာ သီချင်း၊ ရုပ်ရှင်၊ ဖက်ရှင်၊ အားကစားနဲ့ သင်စိတ်ဝင်စားတဲ့မည်သည့်အကြောင်းအရာမဆို သင့်နောက်ကွယ်က ဖြစ်ပျက်တဲ့အရာများ အတွင်းကျကျသိရှိရန် အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။
သင်အနှစ်သက်ဆုံး အနုပညာရှင်၊ အမှတ်တံဆိပ်နဲ့ သင်လေးစားသူတို့ရဲ့ စကားပြောဝိုင်းကို အချိန်နဲ့ တပြေးညီ သိနိုင်ပါတယ်၊ သူတို့ရဲ့ comments များကို "like" နိုင်ပါတယ်၊ ပြီးတော့ အခြား multi-media အကြောင်းအရာများကို share လုပ်နိုင်ပါတယ်။
8. သူငယ်ချင်းများကိုလည်း သူတို့ရဲ့ Viber နံပါတ် သို့မဟုတ် QR code ကို scan ဖတ်ခြင်းဖြင့် အလွယ်တကူ Add နိုင်ပါတယ်။
1. သင့်ဖုန်းမှတစ်ဆင့် Play Store ကိုသွားပါ
2. Google Account (E-mail သို့မဟုတ် G-mail) ထည့်ပါ။ သင့်တွင် အကောင့်မရှိလျှင် အကောင့်အသစ်ဖွင့်ရန် "New" ကိုရွေးချယ်နှိပ်ပြီး Google Account ဖွင့်နိုင်ပါတယ်။
3. နာမည်ကိုဖြည့်ပါ (name နဲ့ last name) ပြီးရင် Google service အတွက် Confirm လုပ်ပါ
4. သင့်အကောင့်အတွက် နာမည်ထည့်သွင်းပါ (နာမည်@gmail.com)
5. အကောင့်နာမည်ကို အတည်ပြုပါ (verify account name)
6. သင်နှစ်သက်တဲ့ လျှို့ဝှက်စာလုံး (password) ကိုထည့်သွင်းပါပြီးလျှင် လျှို့ဝှက်စာလုံးကို အတည်ပြုပါ။
7. သင့်ရဲ့ အီးမေးလ်အတွက် သင်ရွေးချယ်ပြုလုပ်ထားတဲ့ လျှို့ဝှက်စာလုံးကို မေ့သွားတဲ့အခါ ပြန်ပြီးယူရန် options လုပ်ထားပါ
8. သင် Google+ ကိုတိုက်ရိုက်သွားနိုင်ပါပြီ ဒါမှမဟုတ် ကျော်သွားလို့လည်းရပါတယ် (Skip)
9. Play Store မှာရှိတဲ့ icon သို့နှိပ်ပြီး ဝန်ဆောင်မှုကို စတင်နိုင်ပါပြီ
1. သင့်ဖုန်းမှ App Store ကိုသွားပါ
2. သင် ဒေါင်းလုပ်လုပ်ချင်တဲ့ အပလီကေးရှင်းတစ်ခုကို ရွေးပါ
3. "Free" ကိုနှိပ်ပါ ပြီးလျှင် ထပ်နှိပ်ပြီး အပလီကေးရှင်းဆီ ဝင်ပါ
4. သင့်ကို Apple ID နှင့်ဝင်ရန် ပြောလာသည့်အခါတွင် "create new Apple ID" ကိုနှိပ်ပါ။ ပြီးလျှင် ညွှန်ကြားချက်အတိုင်းလုပ်ဆောင်ပါ။ ငွေပေးချေရန်လိုအပ်သည့် အချက်အလက်များ (payment information) ကိုမေးလာလျှင် ဖြည့်ရန်မလိုအပ်ပါ၊ "no" ကိုရွေးချယ်နှိပ်နိုင်ပါတယ်
5. သင်လိုအပ်တဲ့ အချက်အလက်များအားလုံးကို ဖြည့်ပြီးလျှင် သင့်ရဲ့ Apple ID ကို အီးမေးလ်မှ တစ်ဆင့်အတည်ပြုခိုင်းပါလိမ့်မယ်။ Apple ID ကိုအသုံးမပြုနိုင်ခင် အရင်ဆုံး အတည်ပြုရပါမယ်။
မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းမှ HTV အပလီကေးရှင်းဖြင့် တီဗွီကြည့်ရန်
2. ညာဘက် အပေါ်နားတွင်ရှိသော မှန်ဘီလူးပုံကိုရွေးချယ်နှိပ်ပြီး "HTV AEC" လို့ရေးထည့်ပါ
3. ပြီးလျှင် "Install" ကိုနှိပ်ပါ "Accept" ကိုနှိပ်ပါ
2. အောက်နားတွင်ရှိသော မှန်ဘီလူးပုံကိုရွေးချယ်နှိပ်ပြီး "HTV AEC" လို့ရေးထည့်ပါ
3. ပြီးလျှင် "Get" ကိုနှိပ်ပါ "Install" ကိုနှိပ်ပါ
ပထမတန်းစား အရည်သွေးနဲ့ 006
အဆင့်အမြင့်ဆုံးနည်းပညာဖြင့် အကောင်းဆုံးချိတ်ဆက်မှုကို ခံစားပါ
ချွေတာချင်တဲ့ သုံးစွဲသူများအတွက် ဈေးအသက်သာဆုံး